अधिकांश अपराधको कारण आर्थिक लेनदेन ः गृहमन्त्री | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← काठमाण्डौको वसुन्धरामा आज विहानै कारमा विस्फोट, ४ घाइते	नेपाली शेनाको नयाँ भर्नामा मधेशीलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग →	अधिकांश अपराधको कारण आर्थिक लेनदेन ः गृहमन्त्री	08
गृहमन्त्री भीम रावलले सञ्चार उद्यमी जमिम शाह, अरुण सिंघानिया हत्याकाण्ड, डा. भक्तमान श्रेष्ठ अपहरणलगायत अपराधका घटना आर्थिक लेनदेनका कारण भएको दावी गर्नुभएको छ ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै गृहमन्त्री रावलले यस्ता घटनामा संगठित आपराधिक गिरोह संलग्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– यस्ता अपराधका घटनामा आर्थिक लेनदेन र संगठित आपराधिक समूहको प्रभाव विस्तार मुख्य रुपमा कारण रहेको छ । सञ्चार उद्यमि शाहका सबै हत्यारा पक्राउ परिसकेका छन् । सीमापारि रहेका अपराधीलाई पक्राउ गर्ने सिलसिलामा सरकार नजिक पुगेको उहाँको भनाइ थियो । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण काण्डमा विभिन्न पक्षको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन रहेको जानकारी दिँदै हिन्दुवादी दलको दावीप्रति आशंका ब्यक्त गर्नु भयो । उहाँल भन्नुभयो– सरकारले डा. श्रेष्ठलाई अपहरण किन र कसले गरेको भन्ने कुरा केही दिनमा सार्वजनिक गर्दैछौं । यो घटना कसले गरायो भन्नेमा हामी नजिक पुगेका छौ । उहाँले अपहरण काण्डमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने प्रष्ट पार्दै सरकार दोषीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
राजधानीको बसुन्धरामा आजै भएको कार बम विष्फोटको घटना पनि हिन्दुवादी दलहरुको हात रहेको आशंका गर्दै एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले छिट्टै तथ्य सार्वजनिक हुने उहाँको दाबी थियो । संक्रमणकालमा यस्ता घटना घटाएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु सक्रिय रहेको बताउँदै सरकाले त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने दृढता ब्यक्त गर्नु भयो ।
राज्य कमजोर भएको र कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भए यस्ता अनेक समूहले आफ्नो गतिविधिलाई तीब्र बनाउने दावी गर्दै राज्यलाई बलियो बनाउन सबैको पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– राज्य कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता समूह झनै सक्रिय हुन सक्छन् । अहिलेसम्मका आपराधिक घटनाले भावी दिन अझै कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको प्रष्टिएको बताउनुभयो ।
नेटवर्कीङ ब्यवसायमाथि अर्बांैको ठगी गरेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरुलाई सरकारले धमाधम पक्राउ गरी कानूनको दायरामा ल्याएको दावी गर्दै बाँकी फरार अभियूक्तहरु पनि पक्राउको नजिक रहेको जानकारी दिनुभयो । युनिटी काण्ड आर्थिक अपराधको विषय भएकाले गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कारवाही र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो ।
आफ्नो कार्यकालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै सुधारोन्मुख रहेको दावी गर्दै गृहमन्त्रीले आगामी वर्ष पनि सरकारले विशेष सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत बनाउन ठोस रणनीति र कार्यनीति बनाउन सरकार क्रियाशील छ । उहाँले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गठनको प्रक्रियाका सुरुवात, सशस्त्र प्रहरीको विस्तार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पहिलो पटक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य उमेदवार छनौटको प्रक्रिया सुरु गर्नु, दैविप्रकोप केन्द्रीय सूचना केन्द्रको स्थापना, औधोगिक सुरक्षा बल निर्माणको प्रक्रियाको सरुवात महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेको समेत दावी गर्नुभयो ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्दै गृहमन्त्री रावलले छिट्टै दलहरुविच सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो– दलहरुविच अनौपचारिक रुपमा निरन्तर छलफल भईरहेको छ । छिट्टै ठोस सहमति गरेर त्यसलाई दलहरुले औपचारिकता दिने छन् ।
तीनबुँदे सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको औंल्याउँदै उहाँले राजीनामा गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– शान्ति र संविधान सुनिश्चित भएको खण्डमा
लडाकु पुनस्र्थापना, कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता, माओवादी सेनाविहीन नभईकन लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थायित्व पाउन सक्दैन । अब माओवादीसँग विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा विश्वास व्यक्त गर्नुको विकल्प छैन । उसले सडकको भन्दा पनि दलहरुको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । माओवादीले सहमति कार्यान्वय गरयो भने एक मिनेटमै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामा आउने बताउँदै उहाले भन्नु भयो– होइन भने उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बन्न सक्छ । प्रधामन्त्री फेर्दैमा समाधान नहुने भएकाले यसका लागि ठोस दृष्टिकोण चाहिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो– प्रमुख प्रतिपक्षको असहयोगका कारण संविधान निर्माण हुन नसकेको हो । अब पनि सहमति नभए शान्ति र संविधानको काम पूरा हुन सक्दैन । Like this:Like Loading...
← काठमाण्डौको वसुन्धरामा आज विहानै कारमा विस्फोट, ४ घाइते	नेपाली शेनाको नयाँ भर्नामा मधेशीलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...